Freedom Uprising: August 2007
လောင်စာဆီဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုကို အခြေခံ၍ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရသော လူထုဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲများကို နအဖသည် အာဏာရှင်တို့၏ ထုံးစံအတိုင်း လက်နက်အင်အား၊ လူအင်အားတို့ဖြင့် ကြောက်ရွံ့စေမှုများအား ဖန်တီး၍ သူတို့၏ လမ်းကြောင်းကို မမှိတ်မသုန် ဆောင်ရွက် အကြမ်းဖက်လျက်ရှိသောကြောင့် သူတို့၏ လုပ်ရပ်သည် လတ်တလော ပစ္စက္ခအခြေအနေတွင် အသာစီး ရသယောင် ရှိနေပေသည်။
ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲတွေရဲ့နောက်ကွယ်က နအဖရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ဟာ ဘာလဲ။ ဘယ်ကို ဦးတည်နေတာလဲ။ သူ့ရဲ့ ဦးတည်ချက် ကတော့ လယ်ပြင်ဆင်သွားသလို ရှင်းနေတာပါပဲ။
ဘယ်သူမှ အဖက်မလုပ်တဲ့ ညီလာခံဆိုတာကြီးကို သူခိုးရွှေရတပြပြ လုပ်ချင်တယ်။ နိုင်ငံ့အရေးကို အသက်တွေ၊ ဘ၀တွေ ပေးပြီး တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့သူတွေ လုံးလုံး အရေးမစိုက်တဲ့ ၅/၉၆ ဆိုတာကြီးကို နေရာပေး ခြိမ်းခြောက်ချင်တယ်။ ကြောက်စေချင်တယ်။
စားပြီးရင်းစားပြီး စားပိုးမနင်နိုင်သေးတဲ့ နအဖ စစ်အုပ်စုဟာ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုကြောင့် သူတို့ရဲ့ အဆီတ၀င်းဝင်း စားခွက်တွေ ပျောက်သွားတော့ ဦးသူစားစတမ်း၊ နိုင်သူစားစတမ်းဆိုပြီး ဇာတ်တူသား စားတော့တာ အားလုံးအသိ။ ထပ်စားရင် တပ်ပျက်တော့မယ့် ကိန်းဆိုက်တော့ လူထုဆီက ရသမျှညှစ်ဖို့ အကြံကုန်ဂဠုန်ဆားချက် လုပ်ရတော့တာပါပဲ။
နအဖဟာ တချက်ခုတ် နှစ်ချက်၊ သုံးချက်ပြတ်ဖို့ အကွက်ဆင်လိုက်တာပါပဲ။ မှန်းချက်နဲ့ နှမ်းထွက်ရော နအဖ ကိုက်ရဲ့လား။
တစ်ကောင်ကျွေးပြီး သုံးလေးကောင် စားချင်တဲ့ နအဖ …. ကိုယ်တိုင်ရော …… ပွဲသိမ်းတိုက်ကွက် မမိဖို့ ကြိုတင် ပြင်ဆင်ထားပြီးပြီလား။ ငါလိုလူ ဇမ္ဗူမှာ ရှိလို့လား ဆိုပြီးတော့ ဘ၀င်လေဟပ်နေရင်တော့ ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ သြဘာ ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဆက်သာလုပ် … နအဖရေ …….
သူဆင်တဲ့ အကွက်ထဲမှာ ကျနော်တို့ အသာစီးရလိုက်တာကတော့ ကျနော်တို့ချစ်တဲ့နိုင်ငံက ပြည်သူတွေရဲ့ မီးခဲပြာဖုံးဖြစ်နေတဲ့ တရားမျှတမှု၊ လွတ်လပ်မှု၊ ငြိမ်းချမ်းရေးကို အာမခံနိုင်တဲ့ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုလိုလားတဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေ တငွေ့ငွေ့ တောက်လောင် လာနေတာကို ထင်ထင်ရှားရှား တွေ့မြင်လိုက်ရတာပဲ။ ကျောင်းသားမျိုးဆက်တွေဟာ နှိမ်နင်းဖျောက်ဖျက်လို့မရ ရှင်သန်နေဆဲ၊ မျိုးဆက်တာဝန်တွေကို လက်ဆင့်ကမ်း သယ်ဆောင်နေဆဲ ဆိုတာကို ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်စဖွယ် တွေ့မြင်ရတာ ဟာလည်း ကျနော်တို့ရဲ့ အောင်ပွဲပါပဲ။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၊ ၈၈ မျိုးဆက် နောင်တော်များ၊ ကိုထင်ကျော်တို့ ဦးဆောင်သည့်အဖွဲ့များ၊ အစရှိသည့် အားလုံးသော ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများ ရှေးရှုရာသည် လူကို လူလိုသိသည့် လူလိုဆက်ဆံသည့် စနစ် ပေါ်ထွန်းရေးပင်။
၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ ရပ်တည်ချက်၊ ၈၈ မျိုးဆက် နောင်တော်များ၏ ရဲရဲတောက် တိုက်ပွဲခေါ်သံ၊ ကိုထင်ကျော်တို့၏ ဘာမထီ စိန်ခေါ်မှုများ ............. ။
အားလုံးသော ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများသည် အန္တိမရည်မှန်းချက်ဖြစ်သော ဒီမိုကရေစီပန်းတိုင်ဆီသို့ အဂ္ဂမဟာဗျူဟာ၊ မဟာဗျူဟာ၊ နည်းဗျူဟာ အစ အစ ရှိသည်တို့ကို သက်ဆိုင်ရာ၊ ပိုင်နိုင်ရာ၊ အားသန်ရာ တာဝန်များဖြင့် ချဉ်းကပ်ရာတွင် .....................
ဒီမိုကရေစီ၏ အခြေခံဖြစ်သော အပြန်အလှန်လေးစားမှုကို ရင်ဝယ်ပိုက်၍ အမြင်မတူညီမှုများကို ဆွေးနွေးငြင်းခုံခြင်း၊ ဝေဖန်ခြင်းတို့ဖြင့် တဖြည်းဖြည်း ရင့်ကျက်ရှင်သန်၍ ဆက်လက် ချီတက်ရပေဦးမည်မှာ ကျနော်တို့၏ သမိုင်းပေးတာဝန်များပင် ဖြစ်ပေသည်။
တော်လှန်ရေး လှုပ်ရှားမှုများတွင် လတ်တလော အရေးကြီးသည့် အရေးပေါ် နိုင်ငံရေးကိစ္စများသည် စိတ်ဓာတ်ရေးရာ အဓိက ရည်မှန်းချက်များကို ဖုံးအုပ်သွားဖွယ်ရာ သို့မဟုတ် ပျက်ပြယ်သွားဖွယ်ရာရှိသော အန္တရာယ်နှင့် အမြဲတမ်း ကြုံတွေ့နေရပါသည်။ စိတ်ဓာတ်ရေးရာ ရည်မှန်းချက်များကို ပထမ ဦးစားပေးရမည်။ မပျက်စီးအောင် လုပ်ရမည်ဟု ခိုင်မာစွာ တိုက်တွန်းနေရသည်မှာ ..................... (ဒီမိုကရေစီရှာပုံတော် ၄)
Posted by freeburma at 6:14 AM0comments
"We want the world and international community
to know that the people of Burma remain prisoners in their own country"
..... PLEASE USE YOUR LIBERTY TO PROMOTE OURS .....
by Aung San Suu Kyi, Burma National Leader, 1991 Nobel Peace laureate
Posted by freeburma at 11:12 AM0comments
Posted by freeburma at 9:20 PM0comments
Posted by freeburma at 9:38 AM0comments
Posted by freeburma at 11:06 AM0comments
"ကိုဇော် အန်တီစုနဲ့ ကျန်တဲ့သူတွေရော ဘာအကြောင်းများ ထပ်ကြားရသေးလဲ။"
"အေးကွာ ဘာမှထပ်မကြားရသေးဘူး။ စိတ်ပူစရာပဲကွ။"
"ဒါနဲ့ ရုံးခန်းတွေ ပိတ်တာကရော အနေအထား ဘယ်လိုရှိလဲ။"
"အဖွဲ့ချုပ် မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ အတွင်းရေးမှူးတွေကို အကြောင်းကြားတယ်ကွာ။ ဒီအချိန်လေးမှာပဲ ရုံးခန်းကိုသွား အရေးကြီး စာရွက်စာတမ်းတွေ အမြန်ရွှေ့ပြောင်း၊ သူတို့ ရောက်လာတော့ ချိတ်ပိတ်တယ်ပေါ့ကွာ။"
"ထုံးစံအတိုင်းပေါ့ကွာ။ ကျနော်တို့ကို စိတ်မရှိပါနဲ့။ အထက်က ခိုင်းလို့ လုပ်ရတာပါတဲ့။ သူတို့လက်ခုပ်ထဲက ဆိုတော့လည်း မချိပြုံးပဲ ပြုံးနေရတာပေါ့။"
"ဟေး ကိုဇော် ဘယ်လဲ"
"သြော် .. ကိုအေးကို ပါလား။ ဟိုနား ဒီနားပါပဲ။"
"ဒါနဲ့ ရုံးခန်းတွေ ပိတ်ခံလိုက်ရတယ်ဆို။ ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ ကိုဇော်ရဲ့။ ဒီကောင်တွေ ပိတ်ချင်တိုင်းပိတ် ဖွင့်ချင်တဲ့အခါ ဖွင့်နဲ့ သူတို့လုပ်တိုင်း ငြိမ်ခံနေရလားဗျ။"
"ကိုအေးကိုရေ .. ဒီလို ငြိမ်ခံချင်လို့ ခံနေတယ်တော့ ဘယ်ဟုတ်မလဲ။ အနေအထားတစ်ခုမှာ ……
"ဟာ … သူတို့ ခွင့်ပေးမှ ဖွင့်ရမှာလားဗျ။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် သော့ပြန်ဖွင့်ပြီး ကိုယ့်ရုံးခန်းကိုယ် တက်နေတာပဲ။"
"အကိုက ကိုအေးကိုနော် … ကိုဇော် ….. ကိုအေးကို ပြောတာဟုတ်တယ်ဗျ။ ကိုအေးကိုက ဒီလိုဆန္ဒတွေ ပြင်းပြနေတော့ ကိုအေးကိုပါ လိုက်ခဲ့လေ။ ကိုဇော် … ကျနော်တို့ ကိုအေးကို ပြောတဲ့အတိုင်း လုပ်ရအောင်ဗျာ။"
"နေပါအုံး မင်းက ဘယ်သူလဲ။ ငါ အခု ပြောနေတာက ကိုဇော်တို့ ဘာလုပ်ရမလဲ ပြောနေတာ။ ငါ လုပ်ရမယ့်ဟာ ပြောနေတာ မဟုတ်ဘူး။"
"ကျနော်က ဘယ်သူဘယ်ဝါမှ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုဇော်တို့က ဘာလုပ်လို့ လုပ်ရမယ်မှန်းမသိတော့ အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်မယ့် အခြေအနေစောင့်ကြည့်တာကို လုပ်ထားလိုက်တာလေ။ အခု ကိုအေးကို ပေးတဲ့ အကြံဥာဏ်ကို ကျနော်လဲ ကြိုက်တယ်ဗျ။ ဒီတော့ ကျနော်တို့တွေ ၀ိုင်းကူရအောင်ဗျာ။ ကျနော့်မှာ တူတွေ၊ ပလာယာတွေ၊ ဆောက်တွေ ရှိတယ်။ သွားယူလိုက်အုံးမယ်။ ကိုဇော်တို့နှစ်ယောက် ဒီမှာ ခဏ စောင့်နေအုန်းနော်။"
"မင်း .. မင်း .."
"ဟေ့ကောင် မင်းက ဘာကောင်လဲကွ။ ငါ့ကို ရွဲ့တာလား။"
"ဟာ ကိုအေးကိုကလည်း ကျနော် ဘာရွဲ့လို့လဲ။ ကိုဇော် .. လုပ်ပါအုံး။ ကျနော်ဘာရွဲ့လို့လဲ။"
"ဟ .. မင်းပဲ တူတွေ၊ ပလာယာတွေ၊ ဆောက်တွေ သွားယူမယ်ဆို ……."
"ဟုတ်တယ်လေ … အကို အကြံဥာဏ်ပေးတဲ့အတိုင်းလုပ်မှာလေ။ ဒါကြောင့် အကို့ကိုပါ ခဏစောင့်ခိုင်းထားတာ။ ပို့မယ့်ပို့ ကူးတို့ရောက်အောင်ပို့ပေးပေါ့။ ရုံးခန်းရောက်ရင် …"
"တောက် .. ကိုဇော် ကျနော်သွားမယ်။ ဒီလိုကောင်မျိုးတွေနဲ့ စကားပြောရတာ လက်ပေါက်ကပ်တယ်။"
"ဟာ .. နေပါအုံး ….."
"မင်းကွာ … မျက်နှာပူစရာကြီးကွာ"
"မင်းလို အပြင်လူတစ်ယောက်က ၀င်ပြောတော့ ရှက်သွားတာပေါ့ကွ"
"ကိုဇော် အခုအချိန်မှာ အပြင်လူမှ၊ အဖွဲ့ဝင်မှ ခွဲနေရမယ့်အချိန် မဟုတ်ဘူးဗျ။ တလှေတည်းစီး တခရီးတည်း အတူသွားနေကြတာလေ။
"ငါပြောတဲ့ အပြင်လူဆိုတာ မင်းပြောတဲ့ အဓိပ္ပာယ်မဟုတ်ပါဘူးကွာ။ မင်းက သူနဲ့မှ မသိဘဲ ဘလိုင်းကြီး ၀င်ကစ်တော့ ရှက်သွားတာပေါ့ကွ။"
"ကိုဇော်နဲ့ အဲဒီ ကိုအေးကိုနဲ့က တော်တော်ရင်းနှီးလား။"
"သူက အရင်တုန်းကတော့ အဖွဲ့ချုပ် အဖွဲ့ဝင်ပဲ။"
"သြော် ဒီလိုလား။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျနော်ကတော့ မိုးလားကဲလား သင်္ကြန်အမြောက်သံတွေ ကြားရတာ နားကြားပြင်း ကပ်တယ်ဗျ။"
"ကဲ .. ငါလည်း အိမ်ကကိစ္စလေး တစ်ခုရှိလို့ သွားလိုက်အုန်းမယ်။"
"အိုကေ … ဒါဆို ညမှပြန်ဆုံကြမယ်။ ကျနော်တို့ ဒီပဲယင်းနောက်ဆက်တွဲ ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်မလဲ။ အမြင်ချင်းဖလှယ်ကြမယ်။"
Posted by freeburma at 2:39 PM0comments
Posted by freeburma at 2:06 PM0comments
အရနဲ့ အမိနဲ့ ပြိုင်တူနိုင်ဖို့အရေးအတွက်
ငါသည် တော်လှန်ရေး လုပ်ရမယ်လေ …..
(လူတိုင်း လူတိုင်း လူ့အခွင့်အရေး ရှိရမယ်။
လူတိုင်း လူတိုင်း လူ့အခွင့်အရေး ရသင့်ပါတယ်။)
ညီအကိုတော်တွေအတွက် ၀မ်းနည်းတယ်လေ …..
ပြည်သူတွေကိုကွယ် အဆုံးမသတ်နိုင်ဘူး …..
လူတိုင်း လူတိုင်း လူ့အခွင့်အရေး ရသင့်ပါတယ်။)၂
၈၈၈၈ ကစပြီး လူတိုင်း ရင်ထဲကို ရောက်ခဲ့တဲ့ သီချင်းပေါ့။ အခုထိတောင် နားထောင်တိုင်း နားထောင်တိုင်း ရင်ထဲကို စူးစူးရှရှ ၀င်လာခဲ့တာ……. သြော် .. စဉ်းစားမိလေ ရင်နာလေ ……. ရင်နာလေ ပိုချစ်လေ ……… ဆိုသလိုပါပဲ။
ဟေ့ . . ဒီမှာ
အာဏာရှင်တွေကို ဘယ်တော့မှ ဒူးမထောက်ဘူး
စနစ်ဆိုးကို တို့မျိုးဆက်မှာ ရအောင် ဖျက်ပြမယ်
မျိုးဆက်သစ်တို့ ကောင်းမွေတွေ စံစားရဖို့ ငါတို့တွေ ဘယ်တော့မှ ဦးမညွတ်ဘူး
Posted by freeburma at 9:39 PM0comments
“ ကြယ်ကြွေ သတို့သား ”
ယုံကြည်ရာကို ရင်သွေးလိုလဲ မွေးခဲ့တယ်။
ဒဏ်ရာတွေကို ဆီမီးလိုလဲ ထွန်းခဲ့တယ်။
ကိုယ့်အနာ ကိုယ့်လျှာနဲ့သပ် ရှင်တတ်ခဲ့ပြီးပြီ။
ကိုယ့်အရိုး ကိုယ် အပ်လိုသွေး၊
ကိုယ့်ဝတ်စုံ ကိုယ် ချုပ်လို့
ဒီကနေ့ နေ အပြင်းပြင်းပူတဲ့ ကမ္ဘာမြေရဲ့ဒဏ်ရာကို
လက်ဖ၀ါးတွေနဲ့ ကာကွယ်ဖို့ ငါတို့ နေရစ်ခဲ့အုံးမယ်။
ကမ္ဘာမြေရဲ့ ကြေကွဲခြင်း ဓာတ်ပြားထဲ
မင်းရဲ့ ကဗျာတွေ မာတိကာ စီဖို့
ဒေါင်း အလံ ပြန်စိုက်တဲ့ တနေ့
ငါတို့ … … ။
ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဟောင်း၊ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသမားဟောင်း၊ နာမည်ကျော် စာရေးဆရာ တာရာမင်းဝေရဲ့ ဈာပနတွင် (၈၈) မျိုးဆက်ကျောင်းသားများကိုယ်စား ကိုမင်းကိုနိုင်မှ ဤကဗျာအား ရွတ်ဖတ် ဂုဏ်ပြုခဲ့ပါသည်။
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် (၈၈) နှစ်ပတ်လည် အောက်မေ့ဖွယ် ဒီမိုကရေစီရေး၊ လူ့အခွင့်အရေးတို့အတွက် အသက်ပေးခဲ့ကြရတဲ့ ရဟန်းရှင်လူ ကျောင်းသား ပြည်သူများအား ဂုဏ်ပြုခြင်းဟုလည်း ထပ်တူ ပြုနိုင်ပါသည်။
Posted by freeburma at 10:52 PM0comments
Labels: Fight On, Poem
Posted by freeburma at 11:40 PM0comments
Posted by freeburma at 11:04 AM2comments